I-Padua Villa enepaki elikhulu langasese - I-Airbnb
I-Padua Villa enepaki elikhulu langasese
Campodarsego, Veneto, i-Italy
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-AHC Property Management
U-AHC Property Management Ungumbungazi ovelele
Indawo esanda kubuyiswa, ukuhanjiswa kwendlu yamadoda amakhilomitha angu-10 ukusuka enkabeni ye-Padua ingene epaki langasese. Ifakwe kahle futhi ifakwe kahle esitezi esisodwa.
I-Campodarsego isendaweni enhle engamakhilomitha ambalwa ukusuka e-Padua, e-Venice nase-Treviso futhi ikuvumela ukuba uchithe iholide lokuphumula uxhumana nemvelo.
Ukuhlala kule ndawo yokuhlala kunikeza izivakashi zethu ithuba lokujabulela ipaki elihle.
Indlu iyisimiso se-villa eyinhloko. Ibuyiselwe futhi inambithekayo, ihlotshiswe ngakho konke ukunethezeka, inomahluko wokugxila epaki langasese elinendawo yokubhukuda enkulu, ukusetshenziswa kwayo okwabelwana ngayo nabanikazi.
Ukuhlala kule ndawo yokuhlala kunikeza izivakashi zethu ithuba lokujabulela ipaki elizimele elimangalisayo.
Sizoba kuwe isikhathi sonke sokuhlala kwakho.
OKUBALULEKILE!!! Khumbula ukwazisa ngokufika okungenani ngaphambi kuka-1h.
Indlu ituswa kakhulu emindenini enezingane njengoba ithule kakhulu, ihlukaniswe nomsindo womgwaqo futhi inendawo enkulu yokudlala, ngenxa yepaki elikhulu langasese lapho ingene khona.
Eduzane ungathola zonke izinhlobo zamasevisi: i-supmarket, i-pizzeria, amakhemisi, ibhange, izitolo, ama-bar.
Le ndlu ingamakhilomitha angu-2 ukusuka esiteshini sesitimela sase-Campodarsego, indawo ekahle yokuqala yokuhambahamba emvelweni eceleni komzila we-St. Anthony noma eceleni kwe-Muson dei Sassi, nayo ekahle kakhulu njengomzila womjikelezo.
Indlu ingamakhilomitha angu-15 ukusuka ezindaweni ezithakazelisayo njenge-Basilica yase-San Antonio, i-Scrovegni Chapel ne-Prato della Valle.
Isikhundla sayo esinobuhlakani sikuvumela ukuthi uvakashele kalula izindawo ezibaluleke kakhulu zokuvakasha enyakatho ye-Italy njenge-Venice, i-Padua, i-Treviso, i-Brenta Riviera, i-Abano Terme, i-Vicenza, i-Verona, i-Lake Garda nokunye okuningi.
I-villa inconyelwa kakhulu emindenini enezingane ngoba ithule kakhulu, iqhelelene nomsindo wethrafikhi futhi inesikhala esikhulu sokudlala uma kubhekwa ukuthi icwiliswe epaki elikhulu langasese.
Eduze kuyenzeka uthole konke okudingayo ngokwesibonelo:
isuphamakethe, i-pizzeria, ikhemisi, ibhange, izitolo, imigoqo.
Ibungazwe ngu-AHC Property Management
Siyatholakala ezivakashini zethu phakathi nakho konke ukuhlala
UAHC Property Management Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: M0280170010